Rafitra fandefasana hafatra mandeha ho azy tsara indrindra ho an'ny orinasam-pitantanana fananana
Ampitao amin'ny fotoana mety aminao ny fampahalalana mety amin'ny fotoana tokony hisongadinan'izy ireo amin'ny fifaninanana.
Ny tompon'ireo hofan-trano fialan-tsasatra sy mpitantana orinasan-trano misy serivisy dia manome lanja lehibe ny fifandraisan'izy ireo amin'ny vahinin-dry zareo vahiny hijanona ao amin'ny fialantsasatra na aparthotels. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa mandray vahiny dia miaraka amina asa marobe, koa antsoina automatique na aiza na aiza mety.
Raha vahinin'ny mpitsidika dia mety ho mandreraka ny mandefa imailaka an-tanana ny fampahalalana mitovy, nefa tsy mahazo valiny akory. Matetika ity dia mety mila manaraka ny SMS alefa amin'ny vahiny mba hisarika ny sain'izy ireo. Ankoatra ny fizotry ny famandrihana sy ny fijanonan'ny vahiny, fampahalalana marobe dia mety mila ampitaina amin'ny vahiny. Mandritra izany fotoana izany dia zava-dehibe ny tsy fandefasana ireo saro-pady sasany toy ny kaody fidirana raha tsy efa natao avokoa ny fanaraha-maso ary voafafa tanteraka ny vola. Ny fanarahana maso tsara ireo fepetra rehetra ireo ho an'ny vahiny mamandrika amin'ny fantsona maro dia saika tsy vitan'ny mpiara-miasa.
Ahoana no hanampian'ny Zeevou ny hafatra mandeha ho azy?
Ny ekipanay ao Zeevou dia namolavola endri-javatra maromaro hanamora ny fanatsorana sy fanodinana automatique ny fifandraisana amin'ireo vahiny. Izay mpampiantrano misoratra anarana amin'i Zeevou dia omena amina modely tsy misy hatak'andro ho an'ireo teboka maro amin'ny dia vahiny. Ireo môdely ireo dia misintona ny marikany sary famantarana sy ny mombamomba ny fifandraisana ary manana endrika HTML tsara tarehy. Inona koa, azonao atao ny manova na mandahatra ireo maodely ireo, na mamorona modely vaovao tanteraka.
Tsy vitan'ny ahafahanao mandanjalanja ireo maodely, fa afaka mametra ny lalànan'ny fikafika anao manokana koa ianao. Ho an'ny fitsipiky ny fikafika tsirairay dia azonao atao ny manondro fepetra arak'izay tadiavinao fa tokony hihaona alohan'ny handoroana ireo modely. Azonao atao koa ny mampiditra fampiraikitra miaraka amina fitsipika mitarika, toy ny modely an-trano, torolàlana hidirana na ny faktioran'ny vahiny.
Ny kopian'ny fampandrenesana dia azo adika ihany koa amin'ireo mpikambana ao amin'ny adiresy mailaka avy amin'ny antoko fahatelo. Ankoatry ny fahafahanao mandeha ho azy ny mailaka toy izao, ny fampiraisan'i Zeevou azy ClickSend mamela ny mpampiantrano hamita hafatra amin'ny SMS ho an'ny vahiny sy ny mpiasa ihany koa. Ohatra, afaka mahazo SMS alefa any amin'ny vahiny ianao amin'ny fotoana anaovana famandrihana mba hangataka azy ireo hanamarina ny mailany, na hampandre azy ireo mpikarakara tokantrano madio vaovao raha tsy ampiasain'ny finday fampiharana izay novolavolainay ho an'ny mpanadio, na koa ampahafantaro anay ny mpiasa mpitsidika rehefa nahazo ilay vahiny nanamafy ny fotoana nahatongavan'izy ireo ao amin'ny rafitra mba hahafahan'izy ireo mitodi-doha mankany amin'ilay trano hamelana azy ireo hiditra.